Global Voices teny Malagasy » Ekoatora: Blaogy Miady Amin’ny Herisetra An-tokantrano · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Jona 2018 2:53 GMT 1	 · Mpanoratra Milton Ramirez Nandika (fr) i Samantha Deman, imanoela fifaliana
Sokajy: Amerika Latina, Ekoatora, Fanabeazana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Vao haingana ny fiadidiana ny tanànan'i Guayaquil; any Ekoatora  [amin'ny teny espaniola],no namatsy fifaninanana misokatra ho an'ireo blaogera, vao manomboka na efa zatra, mikasika ny lohahevitra manaraka: ”Voaaro ve isika any an-tokantranontsika tsirairay avy?”. Nosafidiana ity lohahevitra ity mba hanazavana ireo olana herisetra anivon'ny tokantrano ary hanolorana vahaolana mba hamongorana azy ireo any amin'ny isan-tokantrano sy anivon'ny vondrom-piarahamonina.
Na nisy tsikera vitsivitsy  aza [amin'ny teny espaniola] momba ny dokambarotra natao manodidina ilay fifaninanana ary ahiahy hafa ihany koa, mifandray amin'ny hoe tsy hamorona blaogy fa-tsy ny mba handraisana anjara amin'ilay fifaninanana fotsiny ihany ny sasany, dia tratra ireo tanjona napetraka tany am-boalohany [ amin'ny teny espaniola]. Betsaka ihany ireo blaogera nandray anjara tain'ny farany ary nanapaka ny mpitsara. Ireto ireo efatra mpandresy nahazo ny loka vola.
Violencia Discreta [amin'ny teny espanioa] dia mitady ny hampiroboroboana ny fandriampahalemana ao anivon'ny tokantrano, ary avy amin'izany dia mankahery ny fitovian'ny lahy sy ny vavy. I Fernando Landin sy i Princesa Quil no mpanoratra ity blaogy ity. Nanoratra lahtsoratra momba ny lanonana fanomezana ny loka ity farany, izay nanazavany ny antony nanosika azy handray anjara tamin'ilay fifaninanana sy ny hoe ”fa maninona ny vehivavy no voaaro kokoa eny an-dalana noho ny any an-tranony ”:
Tamin'io andro io, nody tany an-tranoko aho tamin'ny tolakandro rehefa nahita vehivavy, iray amin'ireo, marobe, izay mijaly mangina noho ny herisetra tsy hita maso. Nanazava azy tamin-pahatsoram-po aho fa mahaliana ahy ny tantarany ary afaka mahatoky ahy izy. Tsapako ny hatezerany sy ny fahadisoam-panantenanany noho ny fitiavany olona nefa sady miaritra ny daroka ataony, ary ny tsy maintsy iaretany izany noho ny antony aman-jatony tsy afaka takarina raha mbola tsy nisokatra ny maso. Tonga ary ity fanontaniana ity: Iza no niarahako niaina nandritra ireny taona ireny? Avy eo niampita ny fitsarana tao an-tanàna aho, toy ny hatrizay, feno vehivavy niharan'ny fanararaotana, ary nanokatra ny gazety izay nanonona ny trangana vehivavy iray maty novonoin'ny vadiny. Niverina nidina tany amin'ilay lalankely nifanenako tamin'ilay vehivavy very hasin'ny tenany, nikorontam-bolo ary niforitra, tsy misy isalasalana fa satria nisy olona nanambany azy. Niteny irery aho: Fa inona no mitranga eto eh?! Tonga sainga aho tamin'ny naha-zava-dehibe ilay olana, fa sady mahazatra ka toa nampifandraisina tamin'ny zavatra aradalana, kanefa dia mampiseho amintsika fotsiny tsotra izao fa miaina anaty loza mampitebiteby ny fiarahamonintsika.
Hogar Lugar seguro? no anarana nomen'i José Cruz ny bilaoginy. Marihany fa misy ny marimaritra iraisana amin'ny fierreretana fa izay rehetra mitragna aao an-tokantrano dia tafiditra anatin'ny sehatryny fiainana manokana, ary io no manazava amin'ny ampahany ny tsy firesahana ny herisetra an-tokantrano ho fantatry ny daholobe. Mba hanampiana ireo vehivavy hiady amin'ny fanararaotana zakain'izy ireny, dia natsangany ny lisitr'ireo toerana tena tokony halehan-dry zareo hitadiavany fanampiana, any aminà tanàna roa ao Ekoatora: Quito  sy Guayaquil 
Blaogy iray hafa mitondra ny anarana mitovy amin'ny an'i José Cruz. Hogar: Lugar seguro? dia noforonin'i William Zea Morales. Nanangona fijoroana vavolombelona maro ary manazava ny fomba niainan'ny vehivavy ekoatoriana enina amin'ny folo ny herisetra ara-batana, ara-tsaina na ara-nofo ataon'ny vadin'izy ireo . Ity ny tantaran'ny vehivavy 54 taona antsoina hoe Isabela:
Teny amoron-dranomasina no nihaonanay tamin'ny 30 novambra 1994 (andro roa mialohan'ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'ny zanako vavy). Nilaza azy izy fa tia ahy ary nanoratra ny anarany sy ny ahy teo amin'ny hazo voanio kely iray. Nanomboka niaraka izahay ary nahatsiaro ho sambatra aho satria tena tsara fanahy be izy. Tamin'ny nanontaniany ahy raha tiako ny ho alika vaviny no nisehoan'ny fanimbazimbàna voalohany. Tena tohina aho ary nilaza izy fa vazivazy izany. Tany amin'ny tanàna niaviany tao Eoropa no nivadianay. Nanomboka teo, niova daholo ny zava-drehetra. Nasainy niala tamin'ny asako aho ary, noho izany, nila nangataka vola ho an'ny zavatra rehetra ary ary tsy nisy fotoana tsy nahafahany nanala baraka ahy. Nasainy nifanalavitra tamin-janako aho satria nanelingelina azy ny fitsidihan'izy ireo. Nomeny anaram-bosotra manambany aho ary nilaza tamiko izy fa nihanatavy aho. Tamin'ny andro fahadimy taonan'ny nivadianay dia noroahany hiala ny trano aho ary hoy izy: ” Efa voakarama tsara ianao izay.” Nangataka fanampiana aho mba hitadiavana asa ary ankehitriny dia vehivavy vaovao aho.
Tsy nahazo loka ny Prevenciòn de Violencia Intrafamiliar, Guayaquil [amin'ny teny espaniola] saingy nahazo ny Fanomezam-boninahitra Voalohany. Psikology ary mitondra ny anarana hoe Juan Robles Chang ny mpanoratra ilay blaogy. Maneho hevitra mikasika ireo fomba sy toeria maro isan-karazany izay mahatonga ny fisorohana ny herisetra an-tokantrano ho siansa  izy. Manolotra sary vitsivitsy izy mikasika ireo adihevitra niseho nandritra ny Andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny Ankizy tamin'ny novambra 2008 .
Manampy ireo Ekoatoriana hivoaka amin'ny fahanginany manoloana ny herisetra an-tokantrano ireo blaogy ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/07/120563/
 ny fiadidiana ny tanànan'i Guayaquil; any Ekoatora: http://www.guayaquil.gov.ec/
 tsikera vitsivitsy: http://www.pitonizza.com/blogs-en-guayaquil/
 tratra ireo tanjona napetraka tany am-boalohany [: http://concursodeblogsguayaquil.blogspot.com/2008/09/propsito.html
 fa maninona ny vehivavy no voaaro kokoa eny an-dalana noho ny any an-tranony: http://violenciadiscreta.blogspot.com/2008/12/ms-que-un-premio.html
 vehivavy ekoatoriana enina amin'ny folo ny herisetra ara-batana, ara-tsaina na ara-nofo ataon'ny vadin'izy ireo: http://violenciafamiliarguayaquil.blogspot.com/2008/11/testimonios-y-relatos.html
 mahatonga ny fisorohana ny herisetra an-tokantrano ho siansa: http://prevencionviolenciafamiliagye.blogspot.com/2008/12/enfoques-y-teorias-sobre-la-violencia.html
 novambra 2008 : http://prevencionviolenciafamiliagye.blogspot.com/2008/11/sobre-el-conversatorio-compromiso-de.html